Arinka Dahsoon Ee Muse Biixi Lugta Jiiday Sababtuna Tahay Khibraddiisa Hoosaysa Xagga Siyaasadda Somalida | Somaliland Today
← Xisbiga Waddani Oo Dhoollatusyo Waaweyn Ku Gabagabeeyay Ololaha Doorashada Iyo Musharrax Cabdiraxmaan Cirro Oo Muuse Iyo Faysal Kula Taliyay In Ay Tanaasulaan+SAWIRO
Doorashada Iyo Guud Ahaa Guusha Ay Gaadhay Dal Curdin Oo La Dhaho Jamhuuriyada Somaliland →
Arinka Dahsoon Ee Muse Biixi Lugta Jiiday Sababtuna Tahay Khibraddiisa Hoosaysa Xagga Siyaasadda Somalida
Arinka ay ka soo bilaabantay siyaasadda meeqaamkeedu hooseeyo waxay ahayd jeegaanta aan dhaqanaka Somaliland muddo ka shaqayn karayn haddii aanay jamhuur kale wadan. Jeegaan laba reer waa koobabka shaaha ee warqadda ka samaysan (one-time-politics) markii qudhahaydna Silaanyo ayaa shaahii ku cabbay. Muse Biixi waqtiga siyaasadda Somaliland mastaradda si wacan umuu saarin wuxuu weli dultaaganyey halkay siyaasaddu maraysay 2010kii waqtigii Siilaanyo kursiga ku ordayey ee dadaal badan iyo oohin iyo amaah iyo wax kasta isku deyey ka dib markuu laba jeer ku dhacay markii dambe isbaaradii beesha dhexe ka qaaday oo uu xaqna u lahaa in loo doorto Madaxweyne madaama halgan dheer soo maray fursad dambena aanay u hadhin.
Haddaba Muse jar buu Siilaanyo uga talaabsaday oo wuu garanay siyaasadddii shaqaysay 2010kii inaanay shaqaynayn laakiin Muse tiibuu albaabada ku garaacay isagoo xitaa Kulmiye isku wada wadi kariwaayey oo dhibaatooyinkii kulmiye dhexdiisa jiray wada hadal ku dhamayn kari lahaa ayuu qarda jeex iyo gudoomiye nimo iyo murashaxnimo qasaba doorashadii ku yimi. Madaxweyne Siilaanyo waxba Muse muu tarin sababaha u waaweynina waa shan tii sano ee Siilaanyo Muse dagaal buu Xukuumadda kula jiray.
Maanta Muse Biixi Doorashadii wuxuu soo gaadhay iyadoo reer Somaliland aanay rabin sababo wada dhaba awgeed. Reer Awdal waxbay ku diideen Muse, reer Hargeyse boqolkii konton wax kalay ku diideen, Reer Saaxil wax u gaara bay ku diideen Muse, reer Togdheer laba wax bay ku diideen oo Burco ku midawday oonuu filayn, reer sool iyo Sanaag wey layaaban yihiin Muse Biixi Codbuu idinka doonayaa.
anigu waxaan arkaa inuu dirqi 31 boqolkiiba helayo Wadanina 62 boqolkiiba . Sidaana waxay ku dhacday todobadii sano siyaasad cusub iyo (home work) giisii kamuu shaqayn ee wax lagu naco badan buu sameeyey.
Anigu haddaa la taliye u ahaan lahaa waxaan u sheegi lahaa wax kasta wada hadal kulmiye dhediisa iyo debediisaba ku gal . Dadkan dubjirka ah ee wax shiidana iska reeb sida Mohamed Biixi Yoonis oo kale u dhaqan dabadeed waa lagu dooran lahaa.
Imika xaalkaagu waa BEDELUU LAGANA NOQONMAAYO.